Chikafu chakakurumbira chechirungu | Zvese nezve iyi gastronomic tsika | Absolut Kufamba
Tsika yechirungu yechirungu inzvimbo yenyika. Vazhinji vevagari vemuUnited Kingdom vanofarira kudya kwemangwanani kune zvazviri, chikafu chakakosha chezuva iri, uye hazvina kuoma kuti vamuke kare kuti vakwanise kunakidzwa nazvo nenzira yakakwana uye yakadzikama.
Nzira yechinyakare ye Chirungu mangwanani inozivikanwa se "kudya kwemangwanani kuzere"Ndeipi inogamuchira mazita akasiyana. Izvi zvinoenderana nenzvimbo yatiri uye nezvatichazodya pakudya kwemangwanani.
1 Nhoroondo yeChirungu chisvusvuro
2 Ndeipi yakakurumbira "yakazara" Chirungu chisvusvuro?
3 Ndeapi echinyakare echirungu emangwanani sarudzo dziripo
4 Mamwe mazita echinyakare echirungu chisvusvuro
5 Zvakakosha Chirungu Kudya Kwemangwanani Condiments
Nhoroondo yeChirungu chisvusvuro
Kunyatsoziva tsika ye Chirungu mangwanani tinofanira kudzokera kuMiddle Ages. Panguva iyoyo munhoroondo, kwaiwanzo kuve nekudya kaviri chete pazuva: chisvusvuro uye kudya kwemanheru. Kudya kwemangwanani kwaisanganisira ale nechingwa uye dzimwe nguva chizi kana nyama inotonhora.
Chimwe chinhu chakakosha nezvechirungu chikafu chamangwanani zvakare ndechekuti yaiwanzoshandirwa nevanokudzwa pazviitiko zvemagariro kana mhemberero dzakadai semichato. Pakutanga, michato yaifanirwa kuitika masikati asati apfuura, saka chikafu chekutanga chakagovaniswa vaviri semurume nemukadzi chikafu chamangwanani, kugamuchira zita rekuti "muchato wekuseni".
Mazai nebhekoni yakatanga kuoneka sechikamu chemangwanani echirungu pa kutanga kwezana ramakore rechi XNUMX, zvakare ichiwedzera mamwe mhando yezvinhu zvakaita seitsvo, sausage kana ndiro dzakarungwa nemafuta eIndia emupunga, hove inoputa uye mazai akabikwa.
Kukosha kukuru kwe Chirungu mangwanani yakanga ichibva ku Industrial Revolution, umo kubva pamaawa marefu ekushanda nesimba uye kushanda mumafekitori, ivo vaida chikafu chakanaka kutanga chinhu mangwanani.
Kune vanhu vazhinji vasingaone kudya kwechirungu nemaziso "ane hutano", asi kune dzimwe nyanzvi dzinopikisa kuti chikafu chakafanana neicho chinoumba yakazara chirungu chisvusvuro, inokwanisa kuwedzera metabolism, kunyanya kana tichigadzira zvese zvigadzirwa pasina kushandisa mafuta, asi yakabikwa kana yakabikwa.
Isu tinofanirwa kuziva kuti, nekuda kwezvinhu izvo zvine iyo Chirungu mangwanani, tinogona kuwana nzvimbo mune yavo menyu, mangwanani emangwanani anowanikwa zvizere muswere wese wezuva. Icho chikafu chatinogona kunakidzwa chero nguva yezuva, izvo zvinopa mukurumbira wayo.
Chinyakare chirungu chisvusvuro Ichi chijairira uye mubatanidzwa wezvikafu zvinowomberwa uye zvinoteverwa nevakawanda uye zvakawanda pasirese, izvo zvinobvumidza rimwe rematambudziko makuru nezvizvarwa zvitsva, chinova chikafu chamangwanani, kutarisirwa nekugadzira chikafu chamangwanani chizere nechikafu. kukwezva ziso pamwe nekunhuhwira uye mukanwa.
Tichifunga nezve simba rekushandisa ratinoita muswere wese, isu tinofanirwa kuisa kana kubvisa zvinhu zve yedu yechinyakare yechirungu chisvusvuro. Basa rekudya kwekuseni kwakanaka ndiko kumutsa metabolism yedu, uye nayo, kwatiri, kuti tirege kuzviwandisa isu nemacalorie anovhiringidza muviri wedu toramba takachengetwa zvichikonzera matambudziko emangwana.
Ndeipi yakakurumbira "yakazara" Chirungu chisvusvuro?
Pakati peGreat Britain neIreland, chisvusvuro "chizere" chechirungu ingangoita mukurumbira kupfuura doro kana chero chimwe chikafu chatingafarire. Kune vanhu vasingafarire mazuva ese, asi vanosarudza kuichengeta pakupera kwevhiki uye kuzororo kana kushanya nemhuri uye neshamwari.
Izwi rakazara rinofambidzana nechirungu chisvusvuro rinobva pachokwadi chekuti chisvusvuro chizere nechikafu chakasiyana chinoita kuti chive chisvusvuro chakanak. Kudya kwemangwanani kwakazara kunopihwa, sezvatinogona kutarisira kubva pakudya kwemangwanani, mangwanani tisati taenda kubasa kana kuchikoro, tiine nguva yakawanda yekunakirwa.
Kusarudzika kwayo kunoita kuti ive chikafu chinogona kunakirwa zuva rese uye kazhinji chinotsiva masikati. Izvo hazviwanzo kudyiwa zuva rega rega revhiki, asi musanganiswa wezvinhu zvacho zvinogadzirwa kuti tikwanise kunakidzwa zuva rega rega, kunyangwe kana zvisina kukwana.
Ndeapi echinyakare echirungu emangwanani sarudzo dziripo
Kudya kupi kwatinogona kugadzira zuva, zvatinofarira uye zvatinofarira, zvinokanganisa zvakanyanya patinosarudza kuti tichava nei pakudya kwemangwanani uye zvatinoisa kana kutora kubva kune inozivikanwa "chinyakare chirungu chisvusvuro". Kukosha uye kufarirwa kwekudya kwemangwanani kunoenderana nemisanganiswa yayo yakawanda pasina kurasikirwa nehunhu hwayo kana chinangwa chayo: kutipa simba rese rinodiwa kutanga zuva
Kudya kwemangwanani kunogona kutanga nejusi reorenji, zviyo, kana muchero mutsva, asi iyo mangwanani emangwanani complete ichagara iri bhekoni nemazai (kunyanya yakamutswa) iyo ichaperekedzwa nemasoseji, madomasi akachekwa, howa, tii, toast uye jam.
Nyika yega yega iri chikamu cheUnited Kingdom ine sarudzo yayo yekuzvipira, iyo inopa huwandu hwevanhu mukati mechinyakare chisvusvuro chinotsvaga kuve sosi yedu huru yesimba zuva rese.
Zvichienderana nemari yatinoda mundiro yedu uye nezvatinoda, tinogona kuwana zvinotevera sarudzo:
Vanozivikanwa yakazara chirungu chisvusvuro ine sarudzo yekuzivana nhema pudding (sausage yeropa yakagurwa kuita zvidimbu zvidiki uye yakakangwa kuitira kuti isarasikirwe nehunhu uye nekuravira), bhinzi dzakabikwa nechingwa chakakangwa, kuve mubatanidzwa unokunda kana tikazviwedzera kuchikamu chakakora chechikafu chamangwanani cheChirungu: mazai, bhekoni, masoseji, etc.
Kudya kwemangwanani kwakazara munzvimbo yeScotland, kune zvigadzirwa zveChirungu chizere mangwanani asi zvakare zvinowedzera Scones mbatatisi, Scottish Haggis uye oatcake.
Munzvimbo yeIrish, chikafu chamangwanani chakazara chine mabhesiki nekuwedzera soda chingwa.
Kana tichida chikafu chechirungu chechirungu munzvimbo yeWales, tinowana tositi nemakeke akagadzirwa nesweweed yakabikwa neoats.
Kune inozivikanwa "Ulster Fry", Hazvina kusiyana neyakajairwa yechirungu chikafu chamangwanani, asi wedzera soda chingwa mune chero nzvimbo yenyika inoshumira zuva rese kune chero munhu anoda kuifarira.
Mamwe mazita echinyakare echirungu chisvusvuro
Zvisinei nekuzivikanwa pasi rese uye kunakidzwa se "yechinyakare yakazara chirungu chisvusvuro”Mumahotera nemaresitorendi uye, zvakare, mudzimba dzakasiyana dzeChirungu varume nevakadzi, zvinonzwisiswa nevamwe vanhu vehuwandu hweUnited Kingdom mune mamwe mazwi anoshandiswa munyika yese. Aya mazwi anosanganisira: A Fry Up (inoshandiswa kutsanangura ndiro ine zvinhu zvakawanda zvakakangwa mukati mayo), Monty yakazara, uye muIreland, dzimwe nguva inonzi "Chub", Zvinoreva zvakafanana ne Fry up, asi chete inoshandiswa mukati medunhu reIrish.
Mukombe wetii unowedzerwa kune ese emangwanani, sezvo chiri chakakurumbira chinwiwa muUK uye yechinyakare nebreakfast, sekofi.
Zvakakosha Chirungu Kudya Kwemangwanani Condiments
Zviripachena kuti zvese hazvisi chikafu muchikafu chechinyakare cheChirungu, isu zvakare tinofanirwa kuyeuka kuti isu tinofanirwa kusanganisira masosi ekuti tiende nawo edu anoyevedza emangwanani. Izvi michero Inogona kuve yakasikwa nyanya muto kana ketchup, jamhu yekuravira yatinofarira zvakanyanya, zvese kune edu toast uye nezve chero chinhu chatinoda kuperekedza nacho.
Tinogona zvakare kuwedzera iyo inozivikanwa Chirungu Marmite muto: iyi pasita yakagadzirwa kubva kune mbiriso yedoro, iyo yakakwana kuperekedza yedu yechinyakare yechirungu chisvusvuro neyakajaira kunhuhwira kwenzvimbo iyi nedoro rayo.
MaChirungu anoremekedza nyaya yechikafu, sezvo iwe uchizoona iwe unofanirwa kuve ne muviri wakasimba kana wakanyanya kushandiswa kurukova irworwo rwekudya mangwanani, asi ndinokuvimbisa kuti kana ukaenda ku London vanofanira kuzviedza kuti vanakidzwe nokunaka kwaro. Sarudzo yakanaka yekunakidzwa nerwendo runonakidza muLondon kubvarura imwe yeakawanda dzimba muLondon inowanikwa paInternet uye uve nechirariro chekuChirungu mubhawa kana muresitorendi, nekuti inowanzo gadzirirwa nekuzvipira uye kazhinji inonaka kwese kwese.
Nhasi, nehupenyu hwakabatikana, hunhu uye zvenguva dzose zvisungo, maChirungu akatambura shanduko mutsika dzawo, zvisati zvajairwa kudya chikafu chamangwanani nenzira iyi mazuva ese, kana kunyanya, asi nhasi, chikamu chikuru cheguta reLondoner chinogutsikana ne Chiedza chemangwanani, yakavakirwa zviyo, toasts, inotorwa nekuchimbidza usati waenda kubasa. Neraki, kana iwe uchizogara muhotera, iwe unogona kuyedza pasina dambudziko, nekuti vangangoita vese vanoisanganisira mumitengo yavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Chirungu mangwanani
Iyi yese Refeo oces hapana munhu anogona kudya chimwe chinhu pamwe chete cm iyi ... zvakare haugone kudya bhinzi pakudya kwekuseni
Izvo zvakanyorwa öcasiones¨.
Zvakafanana chaizvo neiya yataive nayo yekudya kwemangwanani kuMexico
Mhoro Alicia !!! Iwe unayo nzira yekugadzira mabhinzi iwayo?
ndiani anoziva akadaro
Chii chisinganzwisisike chisvusvuro biaaaaaaaaaaaa
Pindura kune anoziva
Zvakanaka chaizvo !!! Ndakaidya muLondon pandakaona nzvimbo. Chandaizoda iresipi yekuti ungagadzirira sei bhinzi idzodzo !!! Ndokumbirawo vana vangu vari kuzovanamata !!!
Ndiri kuzobhadharira chikafu chekuseni cheteki yangu yehunyanzvi
Colombian chaiyo koshitomu